Bursa မှရောက်ရှိလာသည့်ပြည်တွင်း Tram Panorama သည်ပိုလန်သို့ရောက်ရှိ | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBursa မှရောက်ရှိလာသည့်ပြည်တွင်း Tram Panorama သည်ပိုလန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
22 / 02 / 2020 16 Bursa, 48 ပိုလန်, ဥရောပ, လောက, ရထားလမ်း, လှိမ့်စတော့ရှယ်ယာ, အထွေထွေ, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, ဓါတ်ရထား, VIDEOS
Bursa မှထွက်ခွာသည့်ဒေသတွင်း tram panorama သည်ပိုလန်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့7ရထားထုတ်လုပ်သူ Bursa Durmazlar ဦးပိုင် '' မြင်ကွင်းကျယ် '' အီးယူအဖွဲ့ဝင် Olsztyn, ပိုလန်မှစလှေတျတျောတူရကီ၏ပထမဦးဆုံးတိုင်းရင်းသားလမ်းရထားဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်ကြာသပတေးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၃၀ ရက်ကြာသပတေးနေ့တွင် Bursa မှထွက်ခွာသွားသည်။
Durmazlar Holding သည် 2018 ခုနှစ်တွင်ရထားလမ်းစနစ်များတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နှင့်ကြီးပွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပိုလန်နိုင်ငံရှိ Olsztyn မြူနီစီပယ်ကဖွင့်လှစ်သောရထားမော်တော်ယာဉ်များကိုတင်ဒါတင်ဒါအောင်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် tram ထုတ်လုပ်မှု ၁၂ ခုပါ ၀ င်သည့်အဆိုပါသဘောတူညီချက်သည်နောက်ဆက်တွဲကာလတွင် ၂၄ ခုအထိရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ 12-car tram တင်ဒါခေါ်ယူမှုအတွက်ယူရိုသန်း ၂၀ ခန့်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ လူ ၂၁၀ ယောက်စွမ်းရည်ဖြင့် Panorama သည်တစ်နာရီ ၇၀ ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
Durmazlarနောက်ဆုံးတွင်ရိုမေးနီးယား၏မြို့တော်ဘူခါရက်စ်တွင်မြူနီစီပယ်ဖွင့်လှစ်သည့်ယူရို ၁၇၇ သန်းအတွက်ကား ၁၀၀ ကားရထားတင်ဒါတင်ဒါရရှိခဲ့သည်။ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိုရိုမေးနီးယား၏ဒေသခံကုမ္ပဏီ Astra သည်တရုတ် CRRC ပူးပေါင်းအဖွဲ့နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည် Durmazlarပိုလန်ပြီးနောက်ရိုမေးနီးယားအတွက် ဦး စားပေးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Bucharest အတွက် ၃၆ မီတာ Panorama မော်ဒယ်ကိုထုတ်လုပ်မည် Durmazlar36 လအတွင်းအပေါငျးတို့သမော်တော်ယာဉ်များကိုကယ်နှုတ်တော်မူလိမ့်မည်။
Durmazlar ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Durmaray အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ရထားလမ်းလုပ်ငန်းကဏ္in၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့် Holding သည်ယခုအခါတင်ပို့သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။ ရထားလမ်းစနစ်များတွင်တိုးတက်မှုရှိသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်ကိုစတင်ခြင်း Durmazlarဒီနှစ်စက်ရုံသစ်ကိုဒီနှစ်မှာစတင်လည်ပတ်မှာဖြစ်ပြီးမက်ထရို၊ အဝေးပြေးမြန်နှုန်းမြင့်ခရီးသည်ရထားများကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်များထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Durmazlarမော်တော်ယာဉ်များသည်ပြည်တွင်းရှိဒေသများစွာ၌ခရီးသည်များကိုသယ်ဆောင်သည်။ 2018 ခုနှစ်တွင်အစ္စတန်ဘူလ်Eminönü-Alibeyköyလိုင်းသည်ဒိုဂူİnşaat ve Ticaret A.Ş. အားလမ်းရထားယာဉ် ၃၀ စီးရန်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ စာချုပ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးနောက်ပေးပို့ Durmazlarပိုးထည်၊ Greencity နှင့် Panaroma မော်ဒယ်များကိုရရှိနိုင်သည်။ Durmazlar ပြင်သစ် Alstom နှင့်တောင်ကိုရီးယား Hyundai Rotem ကုမ္ပဏီများအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်ရထားကြီးများကိုထုတ်လုပ်သည်။ (Source: ကမ္ဘာ့ဖလား)
မြို့တော်ဝန် Recep Altepe: အီတလီနှင့်ပိုလန်ရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများ ...
ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ Samsun ဓါတ်ရထားမြင်ကွင်းကျယ် Service ကိုထုတ်ပေးခြင်းစတင်
DurmazlarNational Tram Panorama, ပိုလန်၏
Kestel ပိုလန်မှ လာ. Bursaray ရထားလမ်း
Alstom Pendolino ရထားပိုလန်အတွက်အသစ်တခုမြန်နှုန်းစံချိန်သတ်မှတ်ထား
ပိုလန်နိုင်ငံ, ပိုလန်မှအနိမ့်အထပ် LRT မော်တော်ယာဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်
အစ္စတန်ဘူလ်တင့်ကားများနှင့်ဟောင်ဝစ်ဇာİslahiyeဘူတာကနေပိတ် 15 အတွက်